UMashiane unethemba lokuthola amaphuzu amathathu emdlalweni olandelayo | Scrolla Izindaba
UMashiane unethemba lokuthola amaphuzu amathathu emdlalweni olandelayo
Umdlali wasesiswini weKaizer Chiefs, uHappy Mashiane ukholelwa ekutheni bazosebenzisa umdlalo wabo neMaritzburg United ukuguqula isizini yabo.
Amakhosi azobhekana ne-Team of Choice emdlalweni we-DStv Premiership ngoLwesithathu eHarry Gwala Stadium, umdlalo uzoqala ngehora le-6 ntambama.
Amakhosi agcine ukuwina kwi-DStv Premiership bedlala neTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) ngoMasingana kanti manje sebedlale imidlalo emihlanu bengawini.
UHappy Mashiane uthi iqembu lakhe alikho endaweni ye-10 ku-log futhi kufanele baqale ukuqoqa amaphuzu aphezulu ukuze bathuthukise indawo yabo.
“Yithina esizibeke kulesi simo, ngakho-ke kufanele silwe kanzima ukuze siphume kulesi sikhundla futhi sikhuphukele ku-log.” UHappy Mashiane etshela i-PSL Media.
“Akukuhle ukuthi iqembu elikhulu njengeKaizer Chiefs libe kule ndawo,” kusho uHappy Mashiane.
“Sizozimisela kuyo yonke imidlalo futhi sizosebenzisa umdlalo weMaritzburg United ukuguqula isizini yethu.”
Yize bekunzima kwiligi, i-United yehlule iKaizer Chiefs ngambili eqandeni emdlalweni obuse-FNB Stadium, ngesikhathi uJudas Moseamedi eshaya amagoli amabili ngalolu suku.
IMaritzburg United isiphenduke iqembu eliyinkinga kuChiefs njengoba uJudas Moseamedi edlalisa kabi iKaizer Chiefs.
UMashiane uthe okwenza iMaritzburg United ibe yiqembu okunzima ukulishaya yingoba inabadlali abanejubane.
“IMaritzburg United ayijwayele ukuhlulwa, ngoba iyiqembu elihle futhi elikwaziyo ukumelana nezimbangi enkundleni ngakho-ke ngeke kube lula ukubashaya,” kuphetha uMashiane.